वृद्धवृद्धाहरुलाई दुखको खबर : वृद्धभत्ता रोक्ने अर्थमन्त्रीको तयारी, केहि समयमै कार्वानयन हुने !
ARCHIVE, COVER STORY, POWER NEWS » वृद्धवृद्धाहरुलाई दुखको खबर : वृद्धभत्ता रोक्ने अर्थमन्त्रीको तयारी, केहि समयमै कार्वानयन हुने !
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री भएपछी विवादित अभिव्यक्तिका कारण घरजग्गा र सेयर बजारमा मन्दी ल्याएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोक्ने तयारी गरेका छन् ।उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नगदै बाँड्ने विषयमा पुर्नविचार हुने बताएका हुन् ।
‘सामाजिक सुरक्षाको मामिलामा उदार भयौँ, जस अपजस म पनि लिन्छु । तर, अब नगद मात्रै बाँड्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्छौँ।‘ खतिवडाले भनेका छन् । बाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता पाँच वर्षमा पाँच हजार पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका बेला अब उनको यो कदमले कतिको सफलता पाउनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेको तयारी केहि समयमा नै कार्वानयन हुने बुझिएको छ ।